ရုပ်တုနှင့် နတ်ဆိုးမည်သို့ ဆက်နွယ်သနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home ကျမ်းစာ ရေခံမြေခံ လေ့လာခြင်း ဩဝါဒ ရုပ်တုနှင့် နတ်ဆိုးမည်သို့ ဆက်နွယ်သနည်း
ရုပ်တုနှင့် နတ်ဆိုးမည်သို့ ဆက်နွယ်သနည်း
Samuel Soe lwin 5:05:00 AM ကျမ်းစာ, ရေခံမြေခံ, လေ့လာခြင်း, ဩဝါဒ,
၁။ ရုပ်တုဆင်းတုနှင့် နတ်ဆိုး။
“သူတို့သည် အခြားတပါးသောဘုရားအားဖြင့် ငြူစူစေကြ၏။ ရွံရှာဘွယ်သော အမှုအရာအားဖြင့် အမျက် တော် ကို နှိုးဆော်ကြ၏။ ဘုရားမဟုတ်သော နတ်ဆိုး၊ မသိဘူးသော ဘုရား၊ ဘိုးဘေးတို့ မကြောက်ဘူးသော ဘုရားသစ် တို့ အား ယဇ်ပူဇော်ကြ၏” (တရား၊ ၃၂:၁၆-၁၇)။
အထက်ပါ ကျမ်းစကားတွင် “သာသနာပ”၊ “ရုပ်တုဆင်းတု” နှင့် “နတ်ဆိုး” တို့ဆက်နွယ်မှုကိုပြဆိုထားပြီး၊ ယုံကြည်သူ ဘုရားသားသမီးများအနေဖြင့် ထိုသို့သော “ကိုးကွယ်မှု” တို့တွင် လုံးဝပတ်သက်ခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်း မပြု ကြရန်သတိပေးစကားပြောကြားထားသည်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော စကားလုံးတွင် မူရင်း ဟေဗြဲစကားလုံးအရ “သံတူကြောင်းကွဲ” တည်းဟူသော ဆက်နွယ်မှုစကားလုံးတို့ဖြင့် နှစ်ကြိမ် (သို့) သုံးကြိမ်တည်းဟူသော ထပ်ထပ်သုံးထားသောနည်းကို အသုံးပြု လျက် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုသို့အသုံးပြုရာတွင်...
ဟူ၍ယှဉ်တွဲလျက်အသုံးပြုထားပါသည်။ သဒ္ဒါနည်းအရဆိုရပါလျင် “ထိုနတ်ဆိုး” နှင့် “အခြားသောဘုရား” ဆိုသော စကားလုံးတို့သည် တစ်ခုတည်းကိုသာလျင် ညွန်းဆိုသုံးနှုန်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သာသ နာပ တို့၏ ကိုးကွယ်မှုနှင့် နတ်ဆိုးတို့သည် ဆက်နွယ်နေကြောင်း ပြဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာဘုရားနှင့် စစ်မှန်သော ဘုရားတို့သည် ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်းသာဖြစ်ပါသည်။
“သို့ရာတွင်၊ ယေရှုရုန်သည် ဆူဝ၍ ခြေနှင့်ကန် လေ၏။ ဆူဝလျက်၊ တုတ်လျက်၊ ဆီဥနှင့်ပြည့်စုံလျက် နေသ ဖြင့်၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို စွန့်၍၊ ကယ်တင်ရာကျောက်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုလေ၏... ဘုရား မဟုတ်သော နတ်ဆိုး၊ မသိဘူးသော ဘုရား၊ ဘိုးဘေးတို့ မကြောက်ဘူးသော ဘုရားသစ် တို့ အား ယဇ်ပူဇော် ကြ၏” (တရား၊ ၃၂:၁၅၊ ၁၇)။
ဝတ်ပြုရာ၊ ၁၇:၇ တွင်ကား “သူတို့သည် အထက်က မှားယွင်းသကဲ့သို့ နောက်တဖန် နတ်ဆိုးတို့အား ယဇ်မပူ ဇော် ရ။ ဤပညတ်သည် သူတို့အမျိုးအစဉ်အဆက် စောင့်ရသော ပညတ်တော် ဖြစ်သတည်း” ဟူ၍ အတိ အလင်းဆိုပြီး ဆက်နွယ်နေမှုကို ပြဆိုထားပါသည်။ ယခုဖေါ်ပြပါရှိသော “နတ်ဆိုး” ဟူသောအရာတို့ “ဆိတ် ဘုရားများ” ဖြစ်ကြ ပြီး၊ ထိုခေတ်အခါက အနီးဝန်းကျင်ရှိသူများမှ ထိုအတိုင်းပင်လျင် ကိုးကွယ်မှုကို ပြုကြ သည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ကျမ်းစကားအရကြည့်လျင် သာသနာပတို့၏ ဘုရားများနှင့် နတ်ဆိုးတို့သည် တူညီသောအုပ်စုအဖွဲ့များ ပင်ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါကျမ်းစကားများအရ သိရှိနားလည်ရပါသည်။
၃။ ကိုးကွယ်ခံလိုသော မိစ္ဆာတို့ရဲ့အရှင်။
သာသနာပရှိ ဘုရားများနှင့် နတ်များစွာတို့သည် နတ်မိစ္ဆာများနှင့်အတူတကွ ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြထားခြင်းမှာ တိုက် ဆိုင်မှု သက်သက်မဟုတ်။ အမှန်တကယ်လည်း ဆက်နွယ်မှုရှိနေသောအရာများပင်ဖြစ်ပါသည်။
လူအချို့တို့ သည် “တစ်ဆူတည်းသောဘုရား” ဟူ၍နှုတ်က မြွတ်ဆိုကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူကား နီးစပ် ရာတွင် ဟိုပြေးဒီပြေးဖြင့် ကိုးကွယ်မှုကိုပြုနေကြပါသည်။
ထိုသို့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် “သဘာဝလွန်တန်ခိုး” များကိုရရှိကြမည်ဟူ၍ ထင်မှတ်မှားလျက် လမ်းလွဲမှန်းမသိ၊ လွဲနေ လျက်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ စစ်မှန်သောကိုးကွယ်မှုသည် ခရစ်တော်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သာလျင် တိကျသော စိတ်ချမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
နတ်ဆိုးသည် လူတကာတို့၏ ကိုးကွယ်မှုကို ခံယူရရှိလိုသည် (မ၊ ၄:၉)၊ ထို့အတူ မှားယွင်းသောဩဝါဒများစွာ ကို လည်း လူမျိုးစုံစွာဖြင့် ပြန့်ပွားစေလျက်ရှိပါသည်။ (၁ တိ၊ ၄:၁)။ ထိုသို့သောနည်းဖြင့် လူများစွာကို လှည့် ဖြားသိမ်း သွင်းလျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် “စစ်မှန်သောဘုရား” ကိုကိုးကွယ်ခြင်းမရှိ၊ အခြားအခြားသော ကိုးကွယ်မှုအပေါင်းတို့သည် သိ၍ ဖြစ် စေ၊ မသိ၍ဖြစ်စေ နတ်ဆိုးနှင့်စပ်ဆိုင်သော ကိုးကွယ်မှုများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ကိုးကွယ်မှုသည် ဘုရားသခင့်စိတ်တော်နှင့် မတွေ့သည်သာမက ဘုရားနှင့်ဝေးကွာစေရန် နည်းပရိယာယ်များစွာဖြင့် လူတို့အား သမ္မာတရားလမ်းမှ လွဲဖယ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“ထိုသို့မယုံကြည်သောသူတိုကား၊ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော် တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ဘုန်းအသရေ နှင့်ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား၏ အရောင်သည် အလင်းကိုမပေးစေခြင်းငှါ၊ ဤလောကကို အစိုးရသော ဘုရား သည်သူတို့၏ ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေ၏” (၂ ကော၊ ၄:၄)။
၄။ ရုပ်တုနှင့် ခရစ်ယာန်။
ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ယုံကြည်တစ်ဦးသည် ရုပ်တုဆင်းတုများနှင့် လုံးဝပတ်သက်စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိပါ။ “ရုပ်တုရှေ့၌ ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်ကို စားခြင်းအရာမှာ၊ ရုပ်တုသည် ဤလောက၌ အချည်းနှီး သက်သက်ဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ တဆူတည်းသော ဘုရားသခင်မှတပါး အဘယ်ဘုရားသခင်မျှမရှိသည်ကို၎င်း၊ ငါတို့သိကြ၏” (၁ ကော၊ ၈:၄)။
ထို့အတူ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများဖို့ လောက၏ဘုရားများနှင့် နတ်ဆိုးများကို တုန်လှုပ်စရာအကြောင်း လုံးဝ မရှိရခြင်းမှာလည်း အောက်ပါကတိတော်များတွင် ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
“ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကိုလည်း အောင်ကြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည် လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်သာ၍ကြီးတော်မူ၏” ( ၁ ယော၊ ၄:၄)။
ထို့အတူ ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မှလည်း နတ်ဆိုးများအပေါ်တွင် မည်သို့အောင်နိုင်တော်မူခဲ့ကြောင်း ကို မာကု၊ ၅:၇-၈ တွင်အောက်ပါအတိုင်းလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ “အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ သား တော် ယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ ဆိုင်သနည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲတော်မမူမည် အကြောင်း ဘုရားသခင်ကိုအမှီပြု၍ အကျွန်ုပ်တောင်းပန် ပါသည်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် အော်ဟစ်၍ လျှောက် လေ၏။ လျှောက်သည်အကြောင်းကား၊ ညစ်ညူးသောနတ်၊ ထိုလူမှ ထွက်သွားလော့ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီ”ဟူ၍ ဖတ်ရှုရသည့် အတိုင်း ထိုအရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူများ၏ အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ How are idols connected to demons (Deut. 32:16-17)? အားမြန်မာမူပြုပါသည်။
Tags # ကျမ်းစာ # ရေခံမြေခံ # လေ့လာခြင်း # ဩဝါဒ
by Samuel Soe lwin - 5:05:00 AM
Tags ကျမ်းစာ, ရေခံမြေခံ, လေ့လာခြင်း, ဩဝါဒ